Sago Mini Road Rwendo rwemahara kwenguva pfupi | IPhone nhau
Zvekare isu tinotaura nezve mutambo weiyo diki imba, mutambo unowanikwa kurodha mahara kwenguva yakati rebei nekuti iko Kushanda kwevhiki muApp Store. Sago Mini Road Trip ine mutengo wenguva dzose we 2,99 euros muApp Store uye tine chero mhando ye-in-app kutenga.
MuSago Mini Road Trip, tinotamba katsi Jinja. Tinofanira kudaro sarudza kwaunoenda, sarudza mota uye utange kupinda munhangemutange. Tinogona kusarudza pakati pema ice cream mota, anomhanya mota, anotendeuka ... asi chishandiso ichi handicho chete chinobva kumugadziri Sago Sago. MuApp Store tinogona kuwana huwandu hukuru hwemaapplication ediki diki eimba.
1 Sago Mini Road Rwendo Zvimiro
2 Sago Mini Road Rwendo ruzivo
Sago Mini Road Rwendo Zvimiro
Dzinopfuura gumi mota, kubva kumhanyisa mota kuenda kune dzinofamba shangu
Nzvimbo nhanhatu, kubva kumakomo emashiripiti kuenda kuguta guru
Hapana mitemo kana nguva dzvinyiriro. Ongorora izvi iwe pachako kumhanya
Izvo zvakakwana kutora newe munzira dzako nzendo
Yakakurudzirwa vana vari pakati pe2-5
Iko hakuna mukati me-app kutenga kana wechitatu-bato kushambadzira, saka iwe nemwana wako makasununguka kuwana pasina kukanganiswa!
Sago Mini Road Rwendo ruzivo
Kugadziriswa kwekupedzisira: 07-05-2016
Zvese zvinoshandiswa zvinogadzirwa nechikwata chakakura chevagadziri uye vanogadzira vanoongorora kusvika pamabasa ese uye hunhu hwemumwe nemumwe wemitambo yavanogadzirira vadiki vari mumba. Izvo zvinoshandiswa zvinoenderana ne kukurudzira kugona uye kuda kuziva mune zvidiki pamusoro pekusimudzira pfungwa dzako dzese.
Zvakare nekusasanganisira hapana mukati me-app kutenga Tinogona kuzorora zviri nyore tichisiya iPhone yedu kana iPad kune iyo diki yeimba tichiziva kuti vachakwanisa kunakidzwa nemutambo uzere vasina kubhadhara mukati mawo, uye kuti kiredhiti kadhi redu richachengeteka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » Sago Mini Road Rwendo rwemahara kune yakatemwa nguva seapp yevhiki
Amazon inoda chibvumirano chakaringana kutengesa zvakare Apple TV